သင့် ဉာဏ်ရည်တိုးစေဖို့ နေ့တိုင်းလုပ်သင့်တဲ့ အပြုအမူများ – Gentleman Magazine
သင့် ဉာဏ်ရည်တိုးစေဖို့ နေ့တိုင်းလုပ်သင့်တဲ့ အပြုအမူများ
လူ့ဦးနှောက်ရဲ့ မှော်ပညာကို ခံစားချင်ရင် လေးနှစ် ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ Matching Game တစ်ခု ကစားကြည့်ပါ။ ကဒ်လေးတွေကို မှောက်ထားပြီး တစ်ယောက်တစ်လှည့် လှန်ရင်း တူတာနှစ်ခု ယှဉ်တွဲပေးရတဲ့ ဂိမ်းလေးပါ။ အဲဒီ ဦးနှောက်သေးသေးလေးက အရမ်းစွမ်းတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကို ကလေးဦးနှောက်လေးနဲ့ အနိုင်ယူသွားတာ တွေ့ရတာ စိတ်အနှောင့် အယှက် ဖြစ်စရာပါ။
ကလေးတွေဟာ အမြန်ဆုံး သင်ယူလေ့လာနိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ နေရာတိုင်းမှာ အချိန်တိုင်း တိုးတက်နေသူတွေပါ။ အားကျပါသလား?? သင့်မှာသာ အဲဒီစွမ်းရည်ရှိရင် ဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ လူကြီးတွေမှာလည်း မျှော်လင့်ချက် ရှိပါသေးတယ်။ IQ ကို မွေးရာပါနဲ့ ငြိမ်မနေပဲ တိုးမြှင့်လို့ရတယ်ဆိုတာ လူတော်တော်များများ သိကြမှာပါ။ လူတစ်ယောက်ဟာ အပြုအမူ ငါးခုကို နေ့တိုင်းလုပ်ရင် ဉာဏ်ရည် တိုးစေပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ စိတ်ဝင်စားတာ၊ ကိုယ့်ဘာသာ စိန်ခေါ်တာ၊ အသစ် တီထွင်ကြံဆပြီး တွေးခေါ်တာ၊ ခက်ခဲတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ လုပ်တာ၊ အစုအပေါင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်တာ တို့ပါ။
ကလေးတွေအတွက် မြင်ရကြားရသမျှဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ အသစ်အဆန်းဖြစ်နေပါတယ်။ ကလေးဖြစ်နေလို့ အလုပ်အားလုံးဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေပါ။ သူတို့ မွေးကတည်းက ပြဿနာရှင်းဖို့ ကိုယ်ဘာသာ ကြံဆရပါတယ်။ ခက်တာ လုပ်ရင်းကနေ လွယ်တဲ့ နည်းလမ်းကို မြင်လာရတယ်။ လူအသစ်တွေကို တွေ့ရင်းတွေ့ရင်း အစုအပေါင်း ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို ကလေးတွေ ဉာဏ်ကောင်းတာ မဆန်းတော့ဘူးနဲ့ တူပါတယ်။
ကလေးတွေက ဦးနှောက်စွမ်းရည်တိုးစေတဲ့ အရာတွေနဲ့ အမြဲကြုံနေရချိန်မှာ လူကြီးတွေကတော့ ပိုပြီး သက်သာနေပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ လိုက်ရှာရမှာပါ။ သက်သက်သာသာနေဖို့ လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဟာဟာ ဉာဏ်ပိုကောင်းရုံတင်မက နေ့စဉ်ဘဝ အလုပ်တွေပါ အဆင်ပြေစေတယ် ဆိုတာ သိနားလည်ထားရပါမယ်။
သင့်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ကို တည်ဆောက်နေတုန်း သိမှတ်ထားစရာတွေကတော့
၁. စိတ်ဝင်စားစရာ ရှာပါ
စိတ်ဝင်စားစရာဆိုတာ အပြင်မှာ ခက်ခက်ခဲခဲ လိုက်ရှာဖို့ မလိုပါဘူး။ သင့်အတွက် အသစ်တွေ ဖြစ်နေသမျှဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ ချည်းပါပဲ။ အတွေ့အကြုံသစ်တွေ၊ လူသစ်တွေ၊ အလုပ်အကိုင်သစ်တွေက စိတ်ဝင်စားစရာတွေချည်းပါ။ အခွင့်အရေးရရင် ယူလိုက်ပါ။
၂. ကိုယ့်ဘာသာ စိန်ခေါ်ပါ
ဦးနှောက်ဆိုတာ တခြား ကြွက်သားတွေလိုပဲ လေ့ကျင့်လေ ထက်မြက်လေပါ။ သင် တော်တာ သိနေလျက်နဲ့တောင် သက်သက်သာသာမနေပဲ သင့်ကိုယ်သင် အမြဲ စိန်ခေါ်နေပါ။
၃. ထွင်းဖောက် တွေးခေါ်ပါ
တီထွင်မှုမှာ အကျိုး အနန္တရှိပါတယ်။ တီထွင် တွေးခေါ်မှုဟာ ဉာဏ်ကောင်းစေရုံမကပဲ အလုပ်လုပ်အား၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အောင်မြင်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုပါ တိုးစေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာ ထွင်းဖောက်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ သင့်ဦးနှောက်ကို မှတ်သားရုံ သုံးမယ့်အစား တွေးခေါ်ပစ်လိုက်ပါ။
၄. ခက်ခဲတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ လုပ်ပါ
အဲဒါက ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ခန်းပါ။ နံပါတ် ၂ လိုပါပဲ။ အရမ်းကြီး ရုန်းကန်မရလောက်အောင် ခက်ခဲပစ်စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်မှာ နည်းနည်း သင် ခံနိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေနဲ့ လုပ်ကြည့်ပါ။ ဥပမာ Calculator မသုံးပဲတွက်ကြည့်တာ၊ GPS မပါပဲ လမ်းရှာတာ၊ ကိုယ့်ဘာသာ ချက်စားတာလိုပါ။
၅. အစု အပေါင်း လုပ်နေပါ
စိတ်ဝင်စားစရာ ရှာမရတာ၊ တီထွင်ကြံဆဖို့ နည်းလမ်း ရှာမတွေ့တာတွေဟာ ဘယ်နေရာမှာ ရှာရမှန်း မသိလို့ပါ။ အဲဒါဟာ အစုအပေါင်းဝင်လာတဲ့ နေရာပါ။ တခြားလူတွေပြတဲ့ လမ်းကို ယူပါ။ လူများများနဲ့ တွေ့လေ၊ အတွေ့အကြုံ များများ ရလေပါပဲ။
လူစိမ်းတွေနဲ့ မိတ်ဖွဲ့ရတာဟာ ကြောက်ဖို့ကောင်းနေပြီး သက်တောင့်သက်သာ မရှိသလို ခံစားရပါတယ်။ အဲဒါဟာအတွေ့အကြုံ အသစ်တွေကိုလဲ ရစေပါတယ်။
သင့် နေ့စဉ်ဘဝမှာ အဲဒီအချက်ငါးချက်ကို အလေ့အကျင့် လုပ်ပေးခြင်းဟာ နည်းလမ်းပေါင်းစုံ အကျိုးရှိစေပါတယ်။ အနည်းဆုံး ကလေးတွေနဲ့ ဂိမ်းကစားတဲ့အခါ မရှုံးတော့ဘူးပေါ့။
သငျ့ ဉာဏျရညျတိုးစဖေို့ နတေို့ငျးလုပျသငျ့တဲ့ အပွုအမူမြား
လူ့ဦးနှောကျရဲ့ မှျောပညာကို ခံစားခငျြရငျ လေးနှဈ ကလေးတဈယောကျနဲ့ Matching Game တဈခု ကစားကွညျ့ပါ။ ကဒျလေးတှကေို မှောကျထားပွီး တဈယောကျတဈလှညျ့ လှနျရငျး တူတာနှဈခု ယှဉျတှဲပေးရတဲ့ ဂိမျးလေးပါ။ အဲဒီ ဦးနှောကျသေးသေးလေးက အရမျးစှမျးတာ တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ သငျ့ကို ကလေးဦးနှောကျလေးနဲ့ အနိုငျယူသှားတာ တှရေ့တာ စိတျအနှောငျ့ အယှကျ ဖွဈစရာပါ။
ကလေးတှဟော အမွနျဆုံး သငျယူလလေ့ာနိုငျကွပါတယျ။ သူတို့ဟာ နရောတိုငျးမှာ အခြိနျတိုငျး တိုးတကျနသေူတှပေါ။ အားကပြါသလား?? သငျ့မှာသာ အဲဒီစှမျးရညျရှိရငျ ဘာလုပျနိုငျမလဲဆိုတာ စဉျးစားကွညျ့လိုကျပါ။
ကြှနျတျောတို့ လူကွီးတှမှောလညျး မြှျောလငျ့ခကျြ ရှိပါသေးတယျ။ IQ ကို မှေးရာပါနဲ့ ငွိမျမနပေဲ တိုးမွှငျ့လို့ရတယျဆိုတာ လူတျောတျောမြားမြား သိကွမှာပါ။ လူတဈယောကျဟာ အပွုအမူ ငါးခုကို နတေို့ငျးလုပျရငျ ဉာဏျရညျ တိုးစပေါတယျ။ အဲဒါတှကေတော့ စိတျဝငျစားတာ၊ ကိုယျ့ဘာသာ စိနျချေါတာ၊ အသဈ တီထှငျကွံဆပွီး တှေးချေါတာ၊ ခကျခဲတဲ့ နညျးလမျးနဲ့ လုပျတာ၊ အစုအပေါငျးနဲ့ အလုပျလုပျတာ တို့ပါ။
ကလေးတှအေတှကျ မွငျရကွားရသမြှဟာ စိတျဝငျစားစရာ အသဈအဆနျးဖွဈနပေါတယျ။ ကလေးဖွဈနလေို့ အလုပျအားလုံးဟာ စိနျချေါမှုတှပေါ။ သူတို့ မှေးကတညျးက ပွဿနာရှငျးဖို့ ကိုယျဘာသာ ကွံဆရပါတယျ။ ခကျတာ လုပျရငျးကနေ လှယျတဲ့ နညျးလမျးကို မွငျလာရတယျ။ လူအသဈတှကေို တှရေ့ငျးတှရေ့ငျး အစုအပေါငျး ဖွဈလာပါတယျ။ ဒီလောကျဆို ကလေးတှေ ဉာဏျကောငျးတာ မဆနျးတော့ဘူးနဲ့ တူပါတယျ။
ကလေးတှကေ ဦးနှောကျစှမျးရညျတိုးစတေဲ့ အရာတှနေဲ့ အမွဲကွုံနရေခြိနျမှာ လူကွီးတှကေတော့ ပိုပွီး သကျသာနပေါတယျ။ ကိုယျ့ဘာသာ လိုကျရှာရမှာပါ။ သကျသကျသာသာနဖေို့ လှယျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီဟာဟာ ဉာဏျပိုကောငျးရုံတငျမက နစေ့ဉျဘဝ အလုပျတှပေါ အဆငျပွစေတေယျ ဆိုတာ သိနားလညျထားရပါမယျ။
သငျ့ရဲ့ဉာဏျရညျကို တညျဆောကျနတေုနျး သိမှတျထားစရာတှကေတော့
၁. စိတျဝငျစားစရာ ရှာပါ
စိတျဝငျစားစရာဆိုတာ အပွငျမှာ ခကျခကျခဲခဲ လိုကျရှာဖို့ မလိုပါဘူး။ သငျ့အတှကျ အသဈတှေ ဖွဈနသေမြှဟာ စိတျဝငျစားစရာ ခညျြးပါပဲ။ အတှအေ့ကွုံသဈတှေ၊ လူသဈတှေ၊ အလုပျအကိုငျသဈတှကေ စိတျဝငျစားစရာတှခေညျြးပါ။ အခှငျ့အရေးရရငျ ယူလိုကျပါ။
၂. ကိုယျ့ဘာသာ စိနျချေါပါ
ဦးနှောကျဆိုတာ တခွား ကွှကျသားတှလေိုပဲ လကေ့ငျြ့လေ ထကျမွကျလပေါ။ သငျ တျောတာ သိနလေကျြနဲ့တောငျ သကျသကျသာသာမနပေဲ သငျ့ကိုယျသငျ အမွဲ စိနျချေါနပေါ။
၃. ထှငျးဖောကျ တှေးချေါပါ
တီထှငျမှုမှာ အကြိုး အနန်တရှိပါတယျ။ တီထှငျ တှေးချေါမှုဟာ ဉာဏျကောငျးစရေုံမကပဲ အလုပျလုပျအား၊ စှမျးဆောငျရညျ၊ အောငျမွငျမှု၊ ပြျောရှငျမှုကိုပါ တိုးစပေါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အားလုံးမှာ ထှငျးဖောကျတှေးချေါနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ။ သငျ့ဦးနှောကျကို မှတျသားရုံ သုံးမယျ့အစား တှေးချေါပဈလိုကျပါ။
၄. ခကျခဲတဲ့ နညျးလမျးနဲ့ လုပျပါ
အဲဒါက ဦးနှောကျလကေ့ငျြ့ခနျးပါ။ နံပါတျ ၂ လိုပါပဲ။ အရမျးကွီး ရုနျးကနျမရလောကျအောငျ ခကျခဲပဈစရာ မလိုပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ တဈခြိနျမှာ နညျးနညျး သငျ ခံနိုငျလောကျတဲ့ အခွအေနနေဲ့ လုပျကွညျ့ပါ။ ဥပမာ Calculator မသုံးပဲတှကျကွညျ့တာ၊ GPS မပါပဲ လမျးရှာတာ၊ ကိုယျ့ဘာသာ ခကျြစားတာလိုပါ။
၅. အစု အပေါငျး လုပျနပေါ
စိတျဝငျစားစရာ ရှာမရတာ၊ တီထှငျကွံဆဖို့ နညျးလမျး ရှာမတှတေ့ာတှဟော ဘယျနရောမှာ ရှာရမှနျး မသိလို့ပါ။ အဲဒါဟာ အစုအပေါငျးဝငျလာတဲ့ နရောပါ။ တခွားလူတှပွေတဲ့ လမျးကို ယူပါ။ လူမြားမြားနဲ့ တှလေ့ေ၊ အတှအေ့ကွုံ မြားမြား ရလပေါပဲ။
လူစိမျးတှနေဲ့ မိတျဖှဲ့ရတာဟာ ကွောကျဖို့ကောငျးနပွေီး သကျတောငျ့သကျသာ မရှိသလို ခံစားရပါတယျ။ အဲဒါဟာအတှအေ့ကွုံ အသဈတှကေိုလဲ ရစပေါတယျ။
သငျ့ နစေ့ဉျဘဝမှာ အဲဒီအခကျြငါးခကျြကို အလအေ့ကငျြ့ လုပျပေးခွငျးဟာ နညျးလမျးပေါငျးစုံ အကြိုးရှိစပေါတယျ။ အနညျးဆုံး ကလေးတှနေဲ့ ဂိမျးကစားတဲ့အခါ မရှုံးတော့ဘူးပေါ့။
Previous: တစ်သက် တစ်ကြိမ် ပါဝင်ဆင်နွှဲဖူးသင့်တဲ့ ပွဲတော်နှင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ
Next: သင့် ကျားအင်္ဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ ၁၀ ချက်